Ikhaya elithokomele elinokubukwa okumangazayo kwe-Baie de Gaspe
Saint-Georges-de-Malbaie, Québec, i-Canada
Ikhaya lami litholakala kumahektha angama-27 elibheke iBaie of Gaspe phakathi kweGaspe nePerce. Indlu ifakwe ifenisha yaseQuebec eyenziwe ngezandla nemidwebo evela kumaciko endawo. Kunegumbi lokulala lenkosi elilodwa nendlunkulu eyodwa yokulala kanye negumbi lokugeza eli-1 eligcwele phezulu. Kukhona umatilasi oyiwele ngaphansi kombhede wenkosi. Kukhona iwasha/idryer kanye nokugeza okuhhafu. Yize kungekho ukufinyelela olwandle ukusuka endlini kukhona amabhishi angaphakathi kwebanga lokuhamba (1-2 miles) kanye nenombolo engenamkhawulo ibanga elifushane (10-15 miles) away.
Umzuzu nje ungena endlini encane, uzozizwa umbozwe ukunethezeka kwaseQuebec. Ukuthula kwenzelwa ukuthokozelwa ngakho-ke akukho TV (sicela uqaphele njengoba abanye abantu bekhononda ngalokhu) kodwa inqwaba yezincwadi nomculo. Ungabuka ukubukwa okumangalisayo ukusuka e-belvedere (idekhi eseduze konqenqema lwewa) amahora amaningi ekugcineni. Nakuba imikhomo emikhulu ingabonwa ukude, cishe uzobona imikhomo emincane iMinke nezinyoni zasolwandle eziningi (enye yamakoloni amakhulu kakhulu emhlabeni ePerce/Bonaventure Island) eduze. Kukhona ama-binoculars angu-3 ukuze uqiniseke ukuthi awuphuthelwa lutho.
Indlu igcwele ngokugcwele konke okudingayo ukuze ujabulele indawo kuhlanganise nobhasikidi wepikiniki osekulungele ukuhamba namatende olwandle. Ifilosofi yami yehlukile kwezinye izikhala ze-AirBnB eziningi. Kunjengokungathi ngivumela umngane omuhle noma ilungu lomndeni ukuthi lihlale ekhaya lami ngenkathi ngingekho. Ezinye izihambeli zikhala ngokuthi kunempahla yomuntu siqu endlini ngakho-ke qaphela nje ukuthi ikhaya lami leli hhayi indawo yokuqasha i-AirBnB engenalutho. Sicela uphathe lokhu njengekhaya lakho futhi ukhululeke ukusebenzisa noma yini oyidingayo ekhishini noma emakhabetheni. Uma usebenzisa okuthile ekhishini, sicela ukushintshe noma ukubeke ohlwini lwegrosa ukuze umgcini wendlu akuthenge. Okuwukuphela kwesicelo enginaso esokuthi ngingabusebenzisi utshwala (ngaphandle uma uphelelwe yithemba kodwa ngicela ubuyisele esikhundleni).
Lesi sifunda sifakwe kuhlu njengesinye se-National Geogrphic's kumele sibone izifunda ngesizathu. Bheka ku-www.tourisme-gaspesie.com ukuze uthole izinto eziningi ongazibona nokukwenza ogwini. I-Gaspé Peninsula inamapaki kazwelonke amane kanye ne-UNESCO geopark yomhlaba wonke (iPerce Geopark). Kusukela endaweni ewugwadule yokudoba kanye nokudoba okusezingeni lomhlaba e-Gaspésie National Park (Parc national de la Gaspésie) enomhlambi owodwa we-caribou eningizimu ye-St. Lawrence, kuya ku-8-kilometre (5-mile) Les Graves Trail e-Forillon National. IPaki (Parc national du Canada Forillon) edlula imijondolo emidala yokudoba kanye namabhishi amatshe angamatshe acwebile isendleleni eya eCap Gaspé, iye emaweni aseMiguasha National Park (Parc national de Miguasha) aseneminyaka eyizigidi ezingu-370 izindawo okuyiwa kuzo eziphezulu zanoma yiluphi uhlobo. Futhi-ke, okufanele kukhulunywe ngakho ngokukhethekile indawo eheha izivakashi zetende laseGaspé Peninsula, iBonaventure Island kanye nePercé Rock National Park (Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé), esogwini lwayo. ichopho esempumalanga futhi iqukethe i-Percé Rock (i-Rocher Percé), ukwakheka kwedwala okuyisakhiwo sodumo "okuhlatshwa" ngezansi nge-arch engamamitha angu-15 (49-foot) arch, kanye ne-Bonaventure Island (Île Bonaventure), ikhaya lelikhulukazi emhlabeni. ukuzalanisa ama-gannet kanye nezinkulungwane zezinkulungwane zama-cormorants, ama-puffin nama-murres. Ngaphandle kwendawo yamapaki kazwelonke, idolobhana elincane elingasogwini lolwandle laseGrand-Métis (cishe amahora ama-5 ngemoto uma uqhamuka eQuebece Ciy) liziqhenya ngeReford Gardens edume umhlaba wonke (Jardins de Métis), equkethe izinhlobo eziyi-3,000. zezitshalo eziqhakazayo - okuhlanganisa ukuziqhenya nokujabula kwazo, iqoqo lama-poppies aluhlaza we-Himalayan amahle, angaqondakali - kanye nomsingathi wokudlala unyaka ngamunye kuMkhosi Wengadi Wamazwe Ngamazwe.
Indlu ingahlalwa kunoma yisiphi isizini nakuba ubusika buzobandakanya ukuthola idrayivu esuka kuthelawayeka eya endlini isuliwe. Iqhwa livame ukuba khona kuze kube maphakathi noMeyi. Ungakwazi ukufinyelela endaweni ngokundizela esikhumulweni sezindiza i-Gaspe (YGP) noma ukushayela ogwini usuka eQuebec City (i-~8 hr drive). Isevisi yesitimela itholakala ngezikhathi ezithile endaweni (bheka i-Via Rail) noma ngebhasi.
4.91 ·76 okushiwo abanye
Ikhaya lethu liphakathi nendawo phakathi kweGaspe nePerce endaweni okufinyeleleka kalula kuyo wonke amapaki.
Ungangithola ngomakhalekhukhwini cishe nganoma yisiphi isikhathi sosuku ((INOMBOLO YOFONI IFIHLIWE)); ukuthumela imiyalezo kungilungele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint-Georges-de-Malbaie namaphethelo